Wafdi ka socda dowlada oo Galgaduud u tegay qalabeynta ciidan la tababaray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda dowlada oo Galgaduud u tegay qalabeynta ciidan la tababaray
A warsame 9 December 2014
Mareeg.com: Wafdi uu hoggaaminayo sii hayaha xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Mahad Salaad iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray magaalada Dhuusamreeb ee xarunta gobolka Galguduud.
Masuuliyiintaan ayaa halkaas u tegay shaqo gelinta iyo hubeynta ciidamo loo tababaray dowladda Soomaaliya oo ku sugan Dhuusamareeb.
SIdoo kale, wafdigaan ayaa Galgaduud u tegay dardar galinta maamul u sameynta gobollada dhexe ee dalka.
Janaaral Maxamed Jimcaale Rooble Goobaale iyo guddoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye “Cirfo” iyo masuuliyiin kale ayaa meel fagaaro ah kula hadlay dadka Dhuusamreeb ku nool, ayagoo sheegay in dowladdu ay dadka degaanka u qabanayso adeegyo u ugu horreeyo ammaanku, ayagoo ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada.
Ciidamo ku sugan agagaarka Dhuusamareeb ayaa la siin doonaa saanad ciidan, kuwaas oo qeyb ka ah ciidamada Soomaaliya si ay uga qeybgalaan dagaalka ka dhanka ah Alhabaab.
Ciidamada ku sugan Dhuusamareeb ayaa la sheegay ineysan ka qeybgelin howlgalkii loogu magaca daray Badweynta Hindiya.
Akhri: Muxuu Siilaanyo ka yiri hadal laga sheegay Warancadde?
Mareykanka oo adkeeyey amaanka shaqaalaha ka jooga daafaha caalamka (Sabab?)